आजको विनिमयदर कुन देशको कति? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
आजको विनिमयदर कुन देशको कति? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १२८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १२९ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । यसैगरी पाउण्ड एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ।
याे पनि पढ्नुस वाणिज्य बैंकको संख्या १५ वटामा झार्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य
यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ भने युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ ।